UMANYELO ZIMVO ZOLUNTU NGOMTHETHO OSAYILWAYO WOLUNGISO WONCEDO LWEZENTLALO | wcpp
Home » UMANYELO ZIMVO ZOLUNTU NGOMTHETHO OSAYILWAYO WOLUNGISO WONCEDO LWEZENTLALO
UMANYELO ZIMVO ZOLUNTU NGOMTHETHO OSAYILWAYO WOLUNGISO WONCEDO LWEZENTLALO
IKomiti eSisigxina kuPhuhliso loLuntu yePalamente yePhondo leNtshona Koloni imema ababandakanyekayo namaqela anomdla ukuba azimase umanyelo-zimvo zoluntu ngoMthetho oSayilwayo woLungiso woNcedo loLuntu [B 8B–2018] (NCOP) oluququzelelwa yiKomiti njengenxalenye yoxanduva lwayo lomgaqo-siseko, ngoLwesibini, 15 Septemba, ngeye-09:00.
“Injongo yoMthetho oSayilwayo kukulungisa uMthetho woNcedo loLuntu, 2004, (uMthetho 13 ka-2004) ukuze kufakelwe iinkcaza ezintsha; ukubonelela ngeentlawulo ezongeziweyo zeenzuzo kwiintsapho ezineentloko ezingabantwana; ukubonelela ngoncedo lwezentlalo lonxunguphalo kwimo yentlekele; ukubhangisa inkqubo yoqwalaselo lwangaphakathi; ukubonelela ngeNkundla yokuqwalasela izibheno ngakwizigqibo ze-Arhente; ukubonelela ngoseko lweCandelo loHlolo njengecandelo likarhulumente; kunye nokubonelela ngemiba enxulumene noko,” utsho uMnu Gillion Bosman, uSihlalo weKomiti eSisigxina kuPhuhliso loLuntu.
Umanyelo-zimvo zoluntu lulungiselelwe ngolu hlobo:
UMhla: Lwesibini, 15 Septemba 2020
Abantu nemibutho enomdla iyakhuthazwa ukuba izimase kwaye ithabathe inxaxheba kumanyelo-zimvo zoluntu kwaye ingenise uluvo olubhaliweyo ngoMthetho oSayilwayo kwiKomiti eSisigxina kuPhuhliso loLuntu ukuze luqwalaselwe. Kuphela luluvo ngomxholo woMthetho oSayilwayo woLungiso oluza kuqwalaselwa.
Amangenelo angangeniswa kwiGosa leeNkqubo zeMigaqo, uNksz Nomonde Jamce, mhlawumbi nge-imeyile ku: njamce@wcpp.gov.za, okanye ngenqaku lelizwi kuWhatsApp kule nombolo yomnxeba kanomyayi: 066 507 3922, ngowe-18 Septemba.
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, ikhonkco losasazo ngqo okanye ukothula ikopi yoMthetho oSayilwayo, cofa apha.